Korneyl Rufle “Waxaan ka digayaa barmaamij socday muddo 4 bilood ah” | Dhacdo
Home Wararka Maanta Korneyl Rufle “Waxaan ka digayaa barmaamij socday muddo 4 bilood ah”
Korneyl Rufle “Waxaan ka digayaa barmaamij socday muddo 4 bilood ah”
Korneyl Aadan Axmed Xirsi (Aadan Rufle) oo ka tirsan Saraakiisha Ciidanka Xoogga Dalka ee Gobolka Gedo ayaa sheegay inuu ka digayo qorshe muddo afar biloodba socday, oo lagu doonayo in lagu fashiliyo doorashada ay tahay in lagu qabto Magaalada Garbahaarey ee Xarunta Gobolka Gedo.
Korneyl Aadan Axmed Xirsi oo Warbaahinta la hadlay ayaa yiri “Waxaan ka digayaa barmaamij socday muddo 4 bilood ah, laga soo bilaabo bishii June, kaas oo lagu fashilinayo in Doorashada Xildhibaanada Golaha Shacabka ka qabsoomto Magaalada Garhabaarey. Barnaamijkaas waxaa garab socda barnaamij kale oo la doonayo in lagu inqilaabo Ciidamada Qalabka Sida ee xad beenaadka Gobolka Gedo ka saaray Kenyanka, sida Degmooyinka Beled Xaawo, Doolow iyo dhulkaas, barnaamijkaas oo ay iska kaashanayaan Dowladda Kenya, haraadigii TPLF oo weli baaqi ku ah Bariga Afrika, niman Gobolka Gedo ka soo jeedo iyo hay’ado fadhigoodu yahay Magaalada Nairobi, qaar ka midana ay jooggaan Degmada Doolow.”
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu yiri “Waxaad ogtihiin in hadda ay Magaalada Garbahaarey ka taagan tahay xiisad u dhaxeyso Gudoomiyaha Gobolka Gedo, Axmed Buulle Gareed iyo Gudoomiyihii isaga ka horeeyay Cismaan Nuur Xaaji (Macalimuu), waxaan xogta ku heleynaa in xiisadan la doonayo in lagu carqaladeeyo amnigii magaalada, si markaasi loogu wiiqo doorashada, waana niman wada shaqeeyo oo ilmo adeer ah.”
Waxa kaloo uu yiri “Laga soo bilaabo 29-kii bishii August Gudoomiyaha Gobolka Gedo waxa uu u safray Degmada Doolow, qaybta Itoobiya, isagoo markaasi ka tagay Magaalada Garbahaarey, muddadaasi dib uguma soo laaban magaalada, halkaas ayuuna habeenkii ku hoydaa.”
Aadan Rufle oo sii hadlayay ayaa yiri “Korneyl Cali Maxamed Aadan oo ka tirsanaa Sirdoonka TPLF iyo Gudoomiyaha Gobolka Gedo ayaa bishii September u safray dalka Itoobiya, oo muddo ku wada maqnaa, markii Gudoomiyaha uu dib ugu soo laabtay Doolow waxaa bilaabatay lacago laga qaadayo Maamulada Degmooyinka iyo Hay’adaha Samafalka, haddii kalena la leeyahay waxaa lagugu bedelayaa hebel iyo hebel. Waxaa ogaanay inay ku soo heshiiyeen in la bedelo Gudoomiye-yaasha saddexda degmo ee ku yaala xad beenaadka ee Doolow, Luuq iyo Beled Xaawo, 25-kii September-na waxaa uu Gudoomiyaha Gobolka Gedo xilka ka qaaday Gudoomiyihii Degmada Doolow, Cali Faarax Mire, isagoona ku soo bedelay Maxamed Xuseen Cabdi (Lafeey), oo uu u magacaabay Gudoomiyaha Degmada.”
Waxa uu intaa ku daray “Fara-gelin dhinaca Itoobiya ah waxaa noogu dambeysay is bedelkii dhacay 2018, markaas oo Ra’iisal Wasaare Abiy Ahmed uu hagaajiyay cilaadkii Somaliya. Fara-gelinta aan hadda ka tirsanayno Korneyl Cali Maxamed Aadan waxay nagu bilaabatay bishii June, waana arrin ay isla ogyihiin Gudoomiyaha Gobolka Gedo. Arrintaas waxay walaac iyo cabsi ay ku abuurtay dadka reer Gedo, waxaana ku kala shakiyay Masuuliyiintii Maamulka Gobolka Gedo.”
Korneyl Rufle oo ka waramayay xaaladda haatan ka taagan Garbahaarey ayaa yiri “Tan iyo markii Gudoomiyaha Gobolka Gedo uu ka tagay Magaalada Garbahaarey waxaa gobolka ka jiray duqaymo ay ka gaysanayaan diyaaradaha Kenya, gaar ahaan inta u dhaxeyso Ceelwaaq iyo Beled Xaawo, Ceelwaaq & Garbahaarey iyo Ceelwaaq iyo Baardheere. Waxaa ka soo barakacay dhulkaas dhowr kun oo qof oo qaarkood soo gaaray Garbahaarey. Hay’ad samafal baa waxay tiri dadkii ugu darnaa ee soo barakacay laba kun oo ka mida ah oo ku sugan Garbahaarey ayaa raashiin siinaynaa, waxaa dhacday inay hay’addii hor istaaggeen ciidan uu watay Gudoomiyihii hore ee Gobolka Gedo, Macalimuu, oo uu haggaayay Gudoomiye Gareed oo ku sugan Doolow, dadkii waa la jujuubay, waxaana 5-tii bishan oo doraad ahayd lagu yiri ka baxa magaalada. Raashiinkaas in la qaybiyo waxaa diiday Macalimuu oo 4-tii bishan shir jaraa’id ka sheegay inuu yahay safka Kenya, ujeedadana waxay tahay in la yiraahdo Gobolka Gedo doorasho laguma qaban karo, waana barmaamij dabo dheer oo dadkaasi ayaga ah ay ka shaqeynayaan.”
Rufle ayaa Ra’iisal Wasaaraha Somaliya, Maxamed Xuseen Rooble ugu baaqay “Ra’iisal Wasaare Rooble waxaan la socodsiinaynaa in il gooniya ku hayo waxa ka socdo Gobolka Gedo iyo qorshaha la doonayo in lagu fashiliyo doorashada lagu qabanayo Garbahaarey.”
Previous articleReer Koonfur Galbeed oo lagu wargeliyay in 15 cisho uga baxaan Ceerigaabo
Next articleWaa sidee xaaladda Magaalada Guriceel + SAWIRRO